नयाँ वर्षको दिन राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ? – Pahilo Page
नयाँ वर्षको दिन राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ?
१ बैशाख २०७६, आईतवार ११:२७ 831 पटक हेरिएको
वि.सं. २०७६ साल बैशाख १ गते । आइतबार । इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १४ तारिख । नेपाल संवत ११३९ चौलाथ्व । चैत्र शुक्लपक्ष । तिथि– नवमी, ६ः३१ बजेदेखि दशमी, २८ः०७ बजेउप्रान्त एकादशी ।
अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिने छ । टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउन सक्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावले फाइदा दिलाउनेछ । इष्र्या गर्नेहरूले अवरोध पुराउने छन् । आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । मिहिनेतले जटिल ठानिएको काम पनि बन्नेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ । पुरुषार्थले प्रतिस्पर्धीहरूको मनोबल कमजोर पार्न सकिने छ । पहिलेका दुश्मनहरूले समेत मित्रताका हात अघि बढाउनेछन् । स्रोतसाधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ ।
दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ । मिहिनेतले पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउने छ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउने छ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिने छन् । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल कम देखिनेछ । खर्च तथा विवाद बढ्ने समय रहेकाले महत्वाकांक्षी योजनामा अघि नबढ्नुहोला । पाउमा चोटपटकको योग देखिएकाले सजग रहनुहोला । छरछिमेकमा केही असमझदारी बढ्न सक्छ । टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ । खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला ।
मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । प्रतिक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ । विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। तर फजुल खर्चले केही समस्या पनि आउलान् ।
कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठामा समस्या पर्न सक्छ । आँटले काम लिन नसक्दा पछि परिनेछ । अहिलेको फाइदा हेर्दा पछिको फाइदा घट्नेछ । कामको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ । इष्र्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन् भने अवसरवादीहरूले कमजोरीको फाइदा उठाउने छन् । सानातिना काममै अल्झनुपर्दा उद्देश्यबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउने छन् । भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउने छ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिने छ । प्रयत्न गर्दा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ । व्यापार–व्यवसाय बढ्नेछ भने श्रमको राम्रो उपलब्धि हात पार्न सकिने छ । तर मनोरञ्जनमा अलमलिँदा लक्ष्यमा पुग्न भने विलम्ब हुनेछ ।
हिम्मतले काम लिँदा चिताएको काम बनाउन सकिनेछ । स्रोतसाधन जुट्नाले नयाँ काम थालनी हुनेछ । केही सम्झौता गर्नुपरे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । वैधानिक प्रावधानले केही अप्ठ्यारो पार्नेछ भने अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नु पर्नेछ । केही चुनौतीहरू देखिनेछन् । सानातिना काममै अल्झनु पर्नेछ भने पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन् ।